Izindaba - Yini inqubo yokwenza ngezifiso ibhokisi lakho lesipho
Ukupakishwa kwelebuli kwangasese kuba yisigcawu esivamile kulezi zinsuku, kusuka enkampanini enkulu kuya kwibhizinisi elincane, bonke bafuna ukuzakhela igama lenkampani ngokufakwa kwalo. Njengoba ukupakisha kuyindlela elula, eshibhile futhi esheshayo yokusabalalisa inhloso.
Namuhla, njengefektri yeminyaka eyi-10 yokubonwa kwephepha, sizokwabelana ngemininingwane ethile yokuthi ungayifaka kanjani ngokwezifiso iphakethe lakho?
Okokuqala, ngokusho kokuma komkhiqizo wakho nentengo ebhekiswe kuwe, khetha ukuthi uyolifunela ibhokisi lamakhadibhodi elinenani lentengo noma ibhokisi eliqinile elenziwe ngezandla elisezingeni eliphakeme.
Namuhla sizoxoxa ngesisekelo sebhokisi lesipho elidume kakhulu kulezi zinsuku.
Okulandelayo, khetha ukwakheka kwebhokisi okuthandayo. Isimo esamukelwe kakhulu kuzoba ibhokisi eliphezulu & lesisekelo, ibhokisi lamakhabethe nebhokisi elenziwe ngebhuku.
Ngemuva kwalokho, khetha okokusebenza okuhle. Iphepha elihlanganisiwe elinokuphrinta kuzoba ukukhetha okuyisisekelo, kukhona nephepha eliningi lobuciko elingathuthukisa izinketho zakho.
Ngemuva kwalokho, sizophothula umsebenzi wobuciko bese sikhetha ubuciko obufanele. Ukukhululeka nokushiswa okushisayo kwegolide kuyisinqumo esihlakaniphile. Ngezansi kukhona okunye okusetshenziswayo kwezandla ezisetshenziswa ngokujwayelekile.
Ekugcineni, sizokwenza isampula ngokuvumelana nayo yonke imininingwane bese uqhubeka nokukhiqiza ngobuningi ngemuva kokuthola imvume yakho.
Ukuqala, ungaxhumana nathi kalula ukuthola eminye imininingwane ngokuthumela uphenyo lwakho ku-info@hanmpackaging.com